MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA SHETLAND SHEEPDOG - EEYAHA
Sheltie Sheepdog Shetland oo jirta 7 sano
Liistada Shetland Sheepdog Mix Digaagga eyda
Shetland Sheepdog waxay u egtahay nuqul yar oo ka mid ah si xun u dahaadhay Collie . Markaad dhinac ka eegto, madaxu wuxuu umuuqdaa cirif aan kala go 'lahayn, oo xuubku waxoogaa ka taabanayaa dhagaha ilaa sanka. Joogsi yar ayaa jira. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Sanku waa madowyahay. Indhaha u eg yicibta ayaa mugdi ah hase yeeshe, indho buluug ah wuxuu ka muuqan karaa jaakadda meeriska buluugga ah. Dhegaha yaryar waa taagnaanayaan 3/4 iyadoo talooyinka horay loo laalaabayo. Qoorta ayaa qaloocsan oo muruq leh. Dabada dheer waa baalal, si toos ah ayaa loo qaadaa, ama xagal yar oo kor ah. Dabada waa inay gaarto hock. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Koodhka labiska ahi wuu dheer yahay waana ku badan yahay jirka oo dhan, laakiin wuu ka gaaban yahay madaxa iyo lugaha, jaakaduna waxay sameysataa maro qoorta iyo laabta. Dharka kore waa toosan yahay oo waa ku adag tahay taabashada, jaakaduna way jilicsan tahay waana adag tahay. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan meeris buluug ah, saabley iyo madow oo leh qaddarro kala duwan oo cadaan iyo / ama buluug ah.
Shetland Sheepdog waa mid daacad ah, diyaarna u ah oo doonaya inuu ku farxo, isagoo samaynaya eey wehel u ah. Docile iyo feejignaan leh dabeecad wanaagsan. Jacaylka, daacadnimada iyo jacaylka qoyskiisa, noocani wuxuu u baahan yahay dad. Bulsho sifiican uga bilaw puppyhood. Waa ilaalin iyo ilaalin fiican. Xasaasi u ah codka codka, eeyahaani wax ma dhagaysan doonaan haddii ay dareemaan inaadan u jeedin waxaad leedahay, sidoo kalena ma dhageysan doonaan haddii aad aad u qallafsan tahay. Waxay uga baahan yihiin milkiilayaashooda inay isdajiyaan, laakiin adkaystaan. Waa in lagu barbaariyaa guri ay dadku joogaan hoggaamiyeyaal kalsooni leh, iswaafaqsan . Caqli badan, firfircoon oo tababaran, Shetland Sheepdog waa mid ka mid ah noocyada ugu caqliga badan. Sirdoonku wuxuu yimaadaa baahida loo qabo in la mashquuliyo maskaxdooda. Waxay jecel yihiin in lagu mashquulo. Sheltie wuxuu ka sarreeyaa dhammaan xoola-dhaqatada caqliga badan, oo awood u leh inuu amar ku bixiyo lo'da waaweyn iyo inuu ku hayo ido yar. Dareenka xoolaha ayaa weli aad ugu xoogan qaar badan oo iyaga ka mid ah. Waxay jecel yihiin inay wax eryan. Bar Eygan in uusan eryan karin baabuurta. Sheltie waa in aan loo oggolaan in uu lacag la’aan ku maro waddo agteeda maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay go’aansato inay baacsato gaari ama wax kale oo ay ku aragto waddada dhinaceeda, taasoo khatar weyn ugu jirta inuu gaari ku dhaco. Quruxdeeda iyo wanaaggeeda darteed, Sheltie waxay noqotay eey wehel ah oo caan ah. Ha u oggolaan eeygan inuu aamino inuu u baahan yahay inuu gurigaaga maamulo, ama in badan dhibaatooyinka dhaqanka bilaabi doono inuu horumariyo. Waxay kala shakisan karaan shisheeyaha, gaar ahaan carruurta. Waxaa laga yaabaa inaysan oggolaan inay naftooda taabtaan shisheeyayaal waxayna soo bandhigi doonaan qaylo joogto ah, iyagoo u sheegaya aadanaha inay iska daayaan keligood. Tani waxay u horseedi kartaa ilaalin , qabsashada iyo xitaa qaniinyada. Waxaa laga yaabaa inay ku gabadaan wax, gadaal ka ciyey markay shirkadu timaado. Eyga ayaa u baahan in loo sheego tani ma ahan dhaqan la aqbali karo. Sifooyinkaa xun xun maaha sifooyinka Sheltie, laakiin waa halkii Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeygu aaminsan yahay inuu hogaamiyaha u yahay aadanaha. Darajooyinka kaladuwan ee dabeecadaha xun natiijada marka eey dareento inay tahay hogaamiyaha xirmo aadanaha waana inuu ilaaliyaa bini'aadamka. Sifooyinkaan xun waxay hoos u dhici doonaan sida ugu dhakhsaha badan bini'aadamka ku hareeraysan eeyga ay bilaabaan inay muujiyaan hoggaanka saxda ah, oo ay weheliyaan xirmo xirmo maalinle ah si loo yareeyo tamarta maskaxda iyo jirka.
shiba inu leh indho buluug ah
Dhererka: 13 - 16 inji (33 - 40.6 cm)
Miisaanka: 14 - 27 rodol (6.4 - 12.3 kg)
Sida Rough Collie, waxaa jira u janjeera xagga xumaan la iska dhaxlo iyo cudurrada indhaha. Khadadka qaar ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin hypothyroidism iyo barakaca patella (jilibka), oo loo maleynayo in laga dhaxlay. Ha ku badin miisaanka si fudud. Qaar ka mid ah eeyaha dhaqda waxay wataan hiddo-wadaha MDR1 kaasoo ka dhigaya kuwo u nugul daroogada qaarkood oo haddii kale okay la siin karo eey kale, laakiin haddii lagu baaro hidda-wadahan wuu dili karaa.
Sheltie waxay ku fiicnaan doontaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
Eygan firfircoon, eeyga quruxda badan wuxuu u baahan yahay jimicsi badan, oo ay ku jiraan maalin kasta socod ama orod. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan orod la’aan, laakiin hubi in eeygu ku sugan yahay aag ammaan ah.
Koodhku wuu ka fududahay in la daryeelo intii aad ka filan lahayd, laakiin cadayashada joogtada ahi waa muhiim. Joodhka si khafiif ah ugu qari biyaha ka hor intaadan bilaabin oo ku dheji darbiyada ka hor inta aysan xumaanin, laakiin si tartiib ah u isticmaal shanlada. Noocani waa daadshe xilliyeed culus. Koodhka cufan ee cufan ayaa la daadiyaa laba jeer sanadkii: guga iyo deyrta. Koodhku si fudud ayuu u daadiyaa wasakhda iyo dhoobada iyo Goobaha lagu ilaaliyo nadaafad ahaantooda. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii ay lagama maarmaan noqoto.
Shetland Sheepdog wuxuu xiriir la leeyahay Rough Collie , labada ey ayaa ka soo degay Kulliyadaha Xuduudaha kaas oo deganaa Scotland. Xudduuda Xuduudaha waxaa la keenay jasiiradda Iskotishka ee Shetland waxaana lala tallaabay Icelandic Yakkin, eey yar oo jasiirad ah oo hadda ah bakhtiyey . Markii la gaaro 1700, Sheltie si buuxda ayaa loo horumariyey. Eeyaha ayaa loo isticmaali jiray inay daajiyaan oo ay ilaaliyaan adhiga idaha ee Shetland. Shaqaalahan diyaarka ah wuxuu ahaa mid aad u jilicsan markii uu daaqayay alaabada yar. Shetland Sheepdog waxaa markii ugu horeysay laga aqoonsaday England 1909 iyo AKC 1911. Sheltie waa mid ka mid ah eeyaha maanta weheliya kuwooda ugu caansan. Aad u caqli badan, waxay ku fiicantahay tartanka adeecida. Qaar ka mid ah hibooyinka Sheltie waxaa ka mid ah: raadinta, dhaqashada, ilaalinta, ilaalinta, firfircoonida, u hoggaansamida tartanka iyo qabashada tabaha.
Riyooyinka L-N-D ee MIST MG CGC aka TURTLE shaati-buluug-buluug ah oo 2 jir ah— ' Turtle wuxuu sameeyaa xoogaa muuqaal ah oo muujinaya, laakiin inta ugu badan oo dhan waa ilmahayga. Wuxuu jecel yahay inuu kubad kula ciyaaro Xarumaha kale ee guriga. Ku boodayaa gacmahayga markaan weydiisto. Wuxuu ku dhacay sida uu heli karo. Lahaanshaha sawirka L-N-D Goobaha
Dan Hocker oo ah Sheepland Sheepdog oo 1 sano jir ah— 'Waa nin lab ah oo jecel, oo jecel inuu la seexdo wiilkeena, jecel inuu kubad soo qaado oo jecel inuu qubeysto.'
Brandi Sheepland Sheepdog oo 6 jir ah— 'Brandi waa eey cajiib ah oo aniga igu habboon.'
Chase the Sheltland Sheepdog puppy at 5 bilood jir
isku darka Ghadafi pug pinscher for sale
'Kuwani waa labadayda eey: Beau (bidix) iyo Teddy Bear (midigta). Waxaan sawirkan ka qaaday markay ahaayeen qiyaastii 15 toddobaad. Labadani waa walaalo waxayna jecel yihiin inay ila noolaadaan beerta. Iyagu waa Xarumo diiwaangashan AKC. Waxay ka helaan jimicsi sida ay u rabaan 60 hektar oo ku wareegsan gurigayga. Labadan waa eeyo yaab leh. Ma qaniinaan mana liqaan haba yaraatee waana la yaab carruurta yaryar. Si dhakhso leh ayey wax u bartaan. Labaduba waxay jecel yihiin inay la ciyaaraan xayawaanka kale halkan, kuwaas oo ah bisadaha , eeyo kale iyo riyo . Waxaan sugayaa inaan u soo bandhigo iyaga lo'da ilaa ay ka yaraadaan, sidaa darteed ma oga inay ku qasaan.
Goobaha, Axl iyo Casa: 'Waxay kuxirantahay daaweynta, waan salaami karnaa 5 daqiiqo max!'
Goobaha, Axl iyo Casa: 'Waan jecel nahay hurdo galabnimo!'
Charlie Sheepland Sheepdog oo jira 7 sano
Mollie qiyaastii 5 bilood
Yogi Sheepland Sheepdog oo ah eey yar oo jirta 8 toddobaad
5-ta eey ugu sareysa ee wax qaniinaya
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Sheltie
Sawirada Sheltie 1
Sawirada Sheltie 2
Sawirada Sheltie 3
Sawirada Sheltie 4
muqisho madow chihuahua lehba dheer
pug iyo min pin mix
waa maxay eeyaha gobolka texas
Soshiyaaldimoqoraadiga Pei iyo isku dhafka bulldog Maraykanka